Russia waa wadan weyn, waxaan ku beeran doonaa baradho! - Magazine "Nidaamka baradhada"
Russia waa wadan weyn, waxaan ku beeran doonaa baradho!
в News, Poll
La wadaag TelegramLa wadaag LinkedInLa wadaag VKKu dir e-mail
Soo degista ayaa soo dhowaanaysa, beeraha - diyaargarow dagaal oo buuxa. Waa maxay niyadda ay beeralayda baradho la kulmaan xilliga? Miyaad ku guulaysatay inaad soo iibsato qalabka ilaalinta lagama maarmaanka ah iyo bacriminta? Sidee yihiin agabka dheeriga ah? Eray ku socda beeralayda.
Waxa kale oo aad jeclaan lahayd
Sergey Biketov, madaxa agronomist ee CJSC "OKTYABRSKOE", gobolka Leningrad
400 ha ka yar baradho
- CJSC Oktyabrskoye waa mid ka mid ah beeraha ugu da'da weyn gobolka Leningrad, waxay ku hawlanayd wax soo saarka abuurka baradhada in ka badan qarni. Shaybaadhkayagu waxa uu soo saaraa walxo abuur ah oo ku saabsan 40 nooc oo baradho ah oo doorasho gudaha iyo dibadda ah. Waxa kale oo aanu beernaa badarka iyo badarka kufsiga.
Sannadkan waxaanu beeraynaa noocyo kala duwan oo baradho ah (Impala, Red Scarlett, Riviera iyo Sante) iyo gudaha (Luck iyo Aurora). Sanadkii la soo dhaafay waxaan haysanay 380 hektar oo baradhada hoosteeda ah, sanadkan waxaan ku kordhineynaa bedka 20 hektar.
Waxaa jira dhibaatooyin farsamo. Waxa aanu bixinay baabuur iskiis ah iyo cagaf-cagafyo dibadda laga keeno, laakiin alaab-qeybiyaha ayaa soo celiyay lacagtii, wax la keeni maayo mustaqbalka dhow. Hagaag, waxaan u wareegi doonaa cagaf-cagafyada dalka laga soo saaro - RSM Rostselmash. Ma jiraan wax ikhtiyaar ah.
Waxaan haysanaa wax kasta oo diyaar u ah bilowga xilli-ciyaareedka marka la eego bacriminta, alaabta ilaalinta iyo sunta cayayaanka. Qandaraasyada waxaa la dhammeeyay ka hor sanadka cusub. Qiimaha ma wada xuma Tusaale ahaan, waxaa dib naloo xisaabiyay qiimihii HOL hoos xittaa ka dib markii aan bixinay hormarka. Waxay ku sii jirtaa inay iibsato bacrimiyeyaasha macdanta dheeraadka ah, iyo tan iyo warshadda wax soo saarkoodu ku yaal meel u dhow, Veliky Novgorod, wax dhib ah ma jiri doonto.
Waxa jirta yaraan weyn oo ah sunta cayayaanka lagu dilo. Daawada waxaa loo isticmaalaa qallajinta dushooda baradhada ka hor goosashada, burburinta qayb ka mid ah haramaha, iyo kufsiga iyo badarka, xaaladaha gobolka waqooyi-galbeed - qalajinta boodhka iyo dhegta. Waxaan ku guuleysanay inaan ka iibsanno baradhada, laakiin waxaa laga yaabaa inaysan ku filneyn abuur kufsi. Deegaankeena waxaa ka da'aya roobab mahiigaan ah oo muddo dheer ka da'aya, lamana yaabo in ay suurtogal tahay in aan la qalajin badar iyo kufsiga.
Baradhada sanadkan waxaa beeran doona cid kasta iyo cid kasta. Dadku waxay ka baqayaan dhibaato, sidaas darteed waxay isku diyaarinayaan inay cawska ku falaan goobahooda oo ay ku beeraan baradhada. Beeraleydu waxay iibiyeen iniinihii jiilkii ugu horreeyay ee beerta maalin iyo badh gudahood.
Dhibka ugu weyni waa in barafku dul yaal beeraha gobolka Leningrad ilaa badhtamaha Abriil. Ololaha abuurka ayaa isbedelay, mana cadda goorta uu bilaaban doono.
Maxim Dmitriev, agronomist KH Geletey Ivan Ivanovich, gobolka Novgorod
140 ha ka yar baradho
- Xiligaan KH Geletey I.I. ma kordhiyo bedka dalagga. Waxaan u qoondeyneynaa baradhada 140 hektar, kaabajka 20 hektar, dabocase 16 hektar iyo 3 hektar oo karootada ah.
Haddii aan ka hadalno baradhada, waxaan inta badan doorbidnaa noocyada ajnabiga ah ee suuqa laga yaqaan (Gala, Rosara, Impala, Colomba), laakiin sannad kasta waxaan sidoo kale soo qaadaa laba ama saddex nooc oo ah xulashada gudaha si loo hubiyo sida ay uga shaqeyn doonaan carradayada iyo xaaladaha cimilada.
Gobolka Novgorod, afar beero beeraley ah, oo ay ku jiraan annaga, ayaa leh heerka beeraha abuurka ee ku takhasusay beerista taranka baradhada sare. Sidaa darteed, wax dhib ah kuma qabno walxaha abuurka: waxaan ka kornaa tuubooyinka tijaabada nafteena, noocyada kuwaas oo daneynaya annaga.
Beertayada waxay soo iibsatay ku dhawaad ​​dhammaan alaabooyinka ilaalinta dhirta ee lagama maarmaanka u ah iyo bacriminta dayrta qiimo aad u wanaagsan. Xiligaan waxaan la shaqeyn doonaa diyaarinta aan qorsheynay inaan ku fulino daawaynta. Dhibaatooyinku waxay kacday kaliya iibsashada HOL iyo bacrimiyeyaasha kale qaarkood. Dhibka ugu weyn hadda waa hal-abuurka ku saabsan kootada. Waxaan rabnaa in aan soo iibsano bacrimiyeyaasha, laakiin geedka midkoodna kuma laha kootada gobolka, ama way dhamaatay sababtoo ah mugga ku filan.
Xaaladda alaabooyinka ilaalinta dhirta maanta waa sida xitaa haddii beertu leedahay lacag iyo rabitaanka in ay la shaqeyso daroogo gaar ah oo la soo dejiyo, wax-soo-saarayaashu ma xaqiijin karaan sahaydeeda, boosas badan ayaa ku yar. Beeraleyda kale ee beeralayda ah ee gobolkeena ayaa dhibaato weyn kala kulma arrintan.
Dhammaan daawooyinka aan ku shaqeyno waxay kor u kaceen qiimaha celcelis ahaan 50%, qaar ayaa labanlaabmay. Qiimaha bacriminta ayaa sidoo kale cirka isku shareeray. Haddii aan hadda iibsanayno qalabka ilaalinta iyo bacriminta, kharashyadayadu waxay kordhin lahaayeen ilaa 60%.
Maxaa dhici doona mustaqbalka? Waxaan u maleynayaa in shirkadaha Yurub ee ka ganacsada alaabada ilaalinta dhirta ay lumin doonaan jagooyinkooda hogaamineed ee suuqayada sababtoo ah qiimaha sare ee daawooyinka iyo dhibaatooyinka saadka iyo saadka. Iyadoo aan la heli karin wax soo saarkooda, beeralayda waa inay wax la shaqeeyaan. Inta badan, wax-soo-saareyaasha beeruhu waa inay u beddelaan miisaaniyada analoogga oo badan.
Iyo dhawr eray oo ku saabsan tignoolajiyada. Dhaqaalaheena, dadaallo badan ayaa lagu hagayaa horumarinta, xoojinta qalabka iyo saldhigga farsamada, iyo casriyeynta wax soo saarka. Anagoo u diyaar garoobayna xiligan, waxaanu dalbanay laba cagaf oo Ajaanib ah, oo aanu lacag ku bixinay, balse ilaa hadda ma cadda wakhtiga aanu qaadanayno iyo in aanu gabi ahaanba heli doonin.
Hadda beerteenu waxay si buuxda ugu diyaarsan tahay shaqada waxaana la siiyaa wax kasta oo lagama maarmaan ah. Qodobka ugu weyn ee xun ee aan ka baqeyno waa xaaladaha cimilada. Abaar ayaa dhacday xagaagii hore - ka waran hadday mar kale dhacdo? Ma rajeyneyno saadaalinta, waxaan ku shaqeyn doonaa xaaladaha soo koraya.
Laga soo xigtay tifaftiraha: Bishii Abriil 2022, KH Geletey I.I. waxa uu noqonayaa 30 jir. Waxaan u hambalyeyneynaa madaxa beerta Ivan Ivanovich Geletey iyo dhammaan shaqaalaha shirkadda sannad-guuradooda waxaana u rajeyneynaa xilli guul leh!
Alexander Torbunov, Madaxa KFH Torbunov, Jamhuuriyadda Chuvash
50 ha ka yar baradho
– Xiligaan waxaan beereynaa baradho miis, noocyo Red Scarlett, Gala, Koroleva Anna, Colomba. Meesha lama dhimin, waxaa looga tagay isla heerkii.
Waxaa jira dhibaatooyin: kiimiko, mishiinada, qaybaha qalabka - wax walba ayaa kor u kacay qiimaha qiyaastii 20-30%. Kharashkayaga diyaarinta xilli ciyaareedka, siday u kala horreeyaan, ayaa kordhay isla qaddar isku mid ah.
Kahor dhibka ugu weyn waa shixnadda alaabada. Qiimaha baakooyinka ayaa labanlaabmay. Tusaale ahaan, unug shabakadeed oo loo isticmaalo 6 rubles, qiimaha cusub waa 11 rubles. Way fiican tahay in aysan jirin wax dhibaato ah oo ku saabsan saadka - waxaan ku shaqeyneynaa is-gaarsiin, baahida baradhada waa mid deggan.
Yury Subbotin, KFH IP Subbotin Yury Nikolaevich, gobolka Kursk
200 ha ka yar baradho
– Waxa aanu soo saarnay baradhada miiska in ka badan 20 sano, waxa kale oo aanu beernaa digirta soyga, qamadiga, waxa aanu qorshaynay in aanu beerno abuur kufsi ah iyo bocorka. Sanadihii la soo dhaafay, beerta ayaa la casriyeeyay, tignoolajiyada cusub ayaa la soo bandhigay (gaar ahaan, nidaamka navigation). Nasiib darro, waxaan hoos u dhigaynaa aagga baradhada 40 boqolkiiba sanadkan.
Tani waxay sabab u tahay, iyo waxyaabo kale, xaqiiqda ah in xilligan xaadirka ah aynaan awoodin inaan samayno ogaanshaha qaladka ee khadka baakadaha. Baradhadu waxay u baahan yihiin in la baakadeeyo si loo buuxiyo shuruudaha tafaariiqda. Waxaanu dirnay codsi ku saabsan agabka baakadaha ee qalabkayaga la soo dejiyay bishii Nofembar, laakiin wakhtiga keenista weli nalooma sheegin. Waxaa jirta suurtogalnimo sare oo ah inaanaan awoodin inaan qalabka soo saarno taariikhda loo baahan yahay. Waa inaan ku shaqeynaa habka gacanta, laakiin ma jiraan shaqaale ku filan - beertu waxay ku taal aagga xadka.
Intaa waxaa dheer, shabag ayaa loo baahan yahay si loogu xidho baradhada. Hadda waxaa naloo soo bandhigay si aan u iibsanno xirmo 2000 oo shabaq ah oo loogu talagalay 21 rubles. Ilaa Maarso 000, qiimaheedu wuxuu ahaa 2022 rubles. Qiimaha ayaa labanlaabmay. Waxaan sidoo kale u baahanahay inaan iibsano calaamado iyo dhejisyo ... Haddii qiimaha baakadaha uusan hoos u dhicin, waxaa lagu qasbi doonaa inaan raadino xalal kale oo loogu talagalay gaarsiinta baradhada silsiladaha tafaariiqda: laga yaabee inaan u soo dirno alaabta sanduuqyada ama bacaha waaweyn.
In kasta oo ay goor hore tahay in laga hadlo baakooyinka. Horay waa beeritaanka, sanadkan waxaan siinay mudnaanta noocyada baradhada ee dibadda laga keeno: kuwani waa Vega, Colomba, Bernina. Dhaqan ahaan, waxaan ku beeri doonaa Gala qadar yar, maadaama la'aanta qoyaanku had iyo jeer ma bixiso natiijada la rabo, mana haysanno waraabka beerta. Laakiin waxaan u aragnaa kala duwanaanshahan inuu yahay halbeegga maanta ee dhadhanka. Waxaan sidoo kale qorsheyneynaa inaan tijaabino noocyada xulashada Belarusian - Breeze iyo Manifesto. Aynu aragno sida ay isu muujinayaan ciiddayada Kursk ee culus. Waxaan jeclaan lahaa inaan la shaqeeyo noocyada Ruushka, haddii ay buuxiyaan shuruudaha suuqa casriga ah.
Dhibaatooyin badan ayaa la filayaa xilli ciyaareedka cusub.
Waxaan leenahay nidaamyada navigation, laakiin sanadkan way adkaan doontaa in la isticmaalo - calaamadaha waa la xannibay. Qalabka navigation wuxuu u oggolaanayaa beeritaanka ugu saxsan, taas oo suurtogal ka dhigaysa in si cad loo fuliyo beerashada isku-dhafan, hoos u dhig boqolkiiba digriiga cagaaran. La'aanteed habka hagidda, way adkaan doontaa in la beero dalagga tayada leh.
Waxay si weyn u korodhay qiimaha bacriminta macdanta iyo hababka kiimikada ee ilaalinta. Tan iyo markii aan soo iibsanay qalab ilaalin ka hor sanadka cusub, oo lagu daray waxaan wali haysanaa kayd laga soo bilaabo 2021, beerteena beeralayda ah wax dhib ah kuma yeelan doonto kimistariga xilli ciyaareedkan. Laakiin waxaa jira dhibaatooyin kale.
Goynta baradhada iyo qalabka lagu beero khudaarta beerteena beeralayda ah waa la soo dejiyaa. Goynta ka dib, waxaan isla markiiba bilaabaynaa hagaajinta. Kharashka lagu hagaajinayo baradhada gooya bilihii November-December ayaa gaadhay 1,2 milyan oo rubi, qiimaha mindiyaha lagu qodayo ayaa kordhay laba ilaa saddex jeer inta lagu jiro wakhtigan.
Dabeecadduna waxay samaynaysaa qaybteeda: bilawga xilliga beeritaanka ayaa dib loo dhigay wakhtiga la joogo. 2021, waxaanu beernay sarreen guga 29-kii Maarso. Sanadkan, Illahay ha naga reebo, ka hor Easter, wax la beero. Hadda waxaan leenahay (11.04 - ka tifaftiraha) roobka, dhaxanta iyo dhoobada beeraha. Sida iska cad, baradhada gobolka Kursk waxa la iibin doonaa wakhti ka dib sida caadiga ah.
Dhanka kale, si kasta oo ay xaaladda cimiladu u horumarto gobollada, Ruushku waa waddan weyn, waxaanu goosan doonaa goosashada. Ruushka waxaa la siin doonaa baradho iyo khudaar.
Tags: baradho korayau diyaar garowga xilli ciyaareedka 2022
ShareShare44Share31Si aad u soo diri
Sheekooyinka la xidhiidha
Laga bilaabo Janaayo ilaa Abriil 2022, 18,7 milyan oo litir oo daawo ah si loo ilaaliyo…
Lyudmila Dulskaya Suuqa wax-soo-saarka dhirta ayaa ku jira xaalad adag: sahayda dawooyinka dibedda laga keeno ayaa la hakiyay, qiimaha ayaa si aad ah u kordhay marka loo eego sannadkii hore, alaab-qeybiyeyaasha ...
Ekaterina Kudashkina, Musharaxa Sayniska Beeraha Ekaterina Kudashkina, Musharaxa Sayniska Beeraha Salinaynta biyaha iyo carradu waa caqabado halis ah oo ku jira casriga ...
Ururka Beeralayda (Beeralayda) Beeraha iyo Iskaashatooyinka Beeraha ee Ruushka (AKKOR) ayaa si isdaba joog ah u soo qaaday arrinta xakamaynta xad-dhaafka ah iyo culeyska kormeerka ee beeraha yaryar. AT...
Mashiinnada beeraha ee casriga ahi waxay saamayn xun ku leeyihiin bacrinta ciidda waxayna sababaan masiibooyinka dabiiciga ah. Gabagabadii waxaa soo jeediyay koox saynis yahano ah oo u dhashay dalka Sweden, Switzerland...
Suuqa loogu talagalay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee beeraha ayaa hadda lagu qiyaasay $ 32,4 bilyan, tirada aaladaha loo isticmaalo beeraha ee hawada sare ayaa kori doona ilaa...
Saaxiibada qaaliga ah! Mashruuca AGROMEDIA AGENCY wuxuu soo bandhigay muuqaal muuqaal ah Yandex. Muusiga". Waxaan kugu martiqaadaynaa inaad subscribe dhahdo oo aad la socoto dhamaan wararka...
Waxaa naku kalsoonahay Pros
Belarus waxay soo koobaysaa natiijooyinka ugu horreeya ee nadiifinta
Habeen hore ee xagaaga cusub